विवाद बढेपछि पुनः सर्‍यो नेकपा सचिवालय बैठक
काठमाडौं, २९ साउन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक पुनः सरेको छ । यसअघि मंगलबारका लागि बोलाइएको तयारी नपुगेको भन्दै बुधबारका लागि सारिएको थियो ।
खासगरी प्रशिक्षण विभागमा देखिएको चरम विभाग अन्य विभागहरुमा पनि देखिएपछि बैठक पुनः विहीबारका लागि सारिएको हो । प्रशिक्षण विभाग बाहेकका अन्य विभागहरुमा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच सहमति जुटे पनि उक्त जिम्मेवारी कसलाई दिनेभन्नेबारेमा विवाद देखिएको छ ।
खासगरी पूर्वएमालेभित्र ओली र माधव नेपाल समूहबीच यसबारे रस्साकस्सी छ । आफ्नो भागमा परेका विभागीय प्रमुखहरु टुंगो लगाउन पूर्वएमालेबाट सचिवालयमा रहेका ६ नेताको बैठक मंगलबार बालुवाटारमा बसेको स्रोतले जनाएको छ ।
ओलीले पूर्वमाओवादीको पक्षमा परेको मजदुर विभागमा आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई ईञ्चार्ज बनाउने प्रस्ताव गरेपछि माधव नेपाल पक्षको असहमति रहेको छ । त्यसैगरी युवामा महेश बस्नेत र महिला विभाग प्रमुखमा गोमा देवकोटाको नाम पनि उनले प्रस्ताव गरेको स्रोतको दावी छ ।
बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गर्दै गृहकार्य नपुगेकोले बैठक सार्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
के छ प्रचण्डको १६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ? (पूर्णपाठसहित)
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सम्पन्‍न
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक दिउँसो १ बजे, यस्ता छन् एजेन्डा
सभामुख र उपसभामुख चुनावः दलैपिच्छे फरक रणनीति
पौडेलको अडानले कांग्रेस बैठक अनिश्चित, महाधिवेशन कार्यतालिकामा विवाद
धुम्बाराहीबाट पुनः बालुवाटार सर्‍यो नेकपा बैठक
धनुषा विस्फोटः चन्दा नदिएपछि विप्लव समूहले घटना घटायो !
घरमै मृत भेटिए कलाकार दीपक क्षेत्री
पूर्ण क्षमताको विमानस्थल निर्माणमा कुनै अवरोध गर्न हुँदैनः महानिर्देशक पोखरेल